Mephisto (2020) | MM Movie Store
ဒီတဈခေါကျ ဇာတျကားကတော့ Mephisto ဆိုတဲ့ Korean Thriller ရုပျရှငျကားပဲ ဖွဈပါတယျဒီကား ကိုတော့ မကွာသေးခငျကမှ ထုတျလုပျထားတာဖွဈပွီးရငျခုနျစိတျလှုပျရှားဖို့ကောငျးတဲ့ ရုပျရှငျအမြိုးအစားကိုသဘောကတြဲ့သူတှအေနနေဲ့ ကွညျ့သငျ့တဲ့ ကားလေးဖွဈပါတယျ
ထယျဆော့ အနနေဲ့က လကျဝခေ့နျြပီယံဟောငျးတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ရနျဖွဈမှုတဈခုကွောငျ့ အကြဥျးကခြံရပွီး ပွနျလှတျလာသူတဈယောကျဖွဈပွီး သူရဲ့ခဈြသူ ဖွဈတဲ့ ဂြီဆူယှနျးနဲ့ အတူတူနထေိုငျကွပါတယျ။
ဆူယှနျးကတော့ သငျတနျးကွောငျးတဈခုမှာပနျးခြီသငျကွားပေးတဲ့ ဆရာမတဈယောကျ ဖွဈပွီး အကွှေးရှငျတှနေဲ့ အခကျခဲရောကျနတေဲ့ သူဖွဈပါတယျ။ ဂြီအှနျး ကတော့ ဆူယှနျးရဲ့ညီမ ကြောငျးသူတဈယောကျပါ ဒါပမေယျ့ ငှရေဖို့အတှကျ လမျးမှားကို ဆကျတိုကျလြှောကျနမေိတဲ့သူပါ။
သူတို့သုံးယောကျအတှကျ အခကျခဲဆုံးအခွအေနေ ရောကျနတောဖွဈတဲ့အတှကျ မတကျသာပဲ သူတို့အတှကျ တနျဖိုးအရှိဆုံးအရာကို ရငျးပွီး မကောငျးဆိုးဝါး နဲ့ ကတိတဈခုပွုလုပျမိလိုကျကွပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ကတိကိုဖကျြခဲ့မယျဆိုရငျ ဘာတှမြေားဆကျဖွဈကွမလဲ ဒီကြိနျစာကနရေော သူတို့သုံးယောကျ လှတျမွောကျနိုငျကွမှာလား….. အစရှိတာတှကေို့တော့ ဇာတျလမျးကနတေဈဆငျ့ကွညျ့ရှုရငျး အဖွရှောကွညျ့စခေငျြပါတယျ….
ဒီတစ်ခေါက် ဇာတ်ကားကတော့ Mephisto ဆိုတဲ့ Korean Thriller ရုပ်ရှင်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဒီကား ကိုတော့ မကြာသေးခင်ကမှ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားကိုသဘောကျတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ကြည့်သင့်တဲ့ ကားလေးဖြစ်ပါတယ်
ထယ်ဆော့ အနေနဲ့က လက်ဝေ့ချန်ပီယံဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ဖြစ်မှုတစ်ခုကြောင့် အကျဉ်းကျခံရပြီး ပြန်လွတ်လာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူရဲ့ချစ်သူ ဖြစ်တဲ့ ဂျီဆူယွန်းနဲ့ အတူတူနေထိုင်ကြပါတယ်။
ဆူယွန်းကတော့ သင်တန်းကြောင်းတစ်ခုမှာပန်းချီသင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာမတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး အကြွေးရှင်တွေနဲ့ အခက်ခဲရောက်နေတဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။ ဂျီအွန်း ကတော့ ဆူယွန်းရဲ့ညီမ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ပါ ဒါပေမယ့် ငွေရဖို့အတွက် လမ်းမှားကို ဆက်တိုက်လျှောက်နေမိတဲ့သူပါ။
သူတို့သုံးယောက်အတွက် အခက်ခဲဆုံးအခြေအနေ ရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် မတက်သာပဲ သူတို့အတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာကို ရင်းပြီး မကောင်းဆိုးဝါး နဲ့ ကတိတစ်ခုပြုလုပ်မိလိုက်ကြပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ကတိကိုဖျက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေများဆက်ဖြစ်ကြမလဲ ဒီကျိန်စာကနေရော သူတို့သုံးယောက် လွတ်မြောက်နိုင်ကြမှာလား….. အစရှိတာတွေကို့တော့ ဇာတ်လမ်းကနေတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုရင်း အဖြေရှာကြည့်စေချင်ပါတယ်….
The Good Doctor (Season 1) ၊ အပိုငျး (၁၁)
Lord of Shanghai2(2020)
What A Good Secretary Wants – Link 1